Fiteny latina : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Fiteny latina : Fahasamihafan'ny versiona roa
Fiteny latina (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Febroary 2019 à 04:47
27 octets ajoutés , il y a 2 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 25 Oktobra 2018 à 14:22 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Febroary 2019 à 04:47 (hanova) (esory)
Ny '''fiteny latina''' (amin'ny teny latina ''lingua latīna'') dia fiteny taloha notenenin'ny mponina tao amin'ny faritr'i Latium, eo amin'ny misy an'i [[Roma]] ankehitriny. Io fiteny io dia avy amin'ny [[Fiteny indô-eoropeanina|fiteny Indoindo-eoropeana]] voalohany tahaka ny ankabeazan'ny fiteny notenenina tao Eoropa. Ny fiteny latina dia avy ao amin'ny saikanosy italianina. Na dia lazaina fa fiteny maty aza io fiteny io, ny fiteny rômana izay mbola ampiasaina ankehitriny ([[Fiteny frantsay|frantsay]], [[Fiteny espaniola|espaniola]], [[Fiteny italiana|italiana]], [[Fiteny romaininaromaniana|romaininaromaniana]]) dia endrika nivoatra anavy amin'io fiteny io. Na dia fiteny maty aza izy io, betsaka ireo olona mahafehy azy, mianatra azy ary mampianatra azy erakeran'izao tontolo izao.
Mbola ampiasain'ny fiteny ankehitriny amin'ny famoronana voambolana vaovao ny fiteny latina, ary mbola ampiasaina amin'ny fanomezana anarana siantifika ny zava-miaina.
Noho ny herin'ny tafika romana tamin'ny fotoan'androny ary noho ny fahefana omen'ny fifehezana ny tenyfiteny latina, dia niparitaka erakeran'i Mediteranea ny fiteny latina, izay nipoiran'ny fitenim-paritra nanome nyireo fiteny rômana ankehitriny.
Taorian'ny fanjavonan'ny Empira rômana tamin'ny taonjato fahadimy, dia nihavitsy hatrany ny isan'ireo olona nahay ny fiteny latina, ary noho izay havitsian'ny fampianarana dia feno teny avy amin'ny fiteny jermanika ary rômana tamin'izany fotoana izany ny fiteny latina nampiasaina tamin'ny [[Andro Antenantenany]].
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-15 ary hatramin'ny taonjato faha-18 dia nesorin'ireo mpanoratra latina eoropeanina ireo teny avy amin'ny teny jermanika ary ireo teny avy amin'ny fiteny rômana. Nandritry ny taonjato telo dia nampiasaina ho teny iraisam-pirenena, teny iofanana ary teny ampiasain'ny siansa ny fiteny latina.
== Fanasokajiana ==
Ny fiteny latina dia fiteny voasintona avy amin'ny teny indô-eoropeana, na dia misy tsy manaiky io hevitra io aza ny mpandalim-piteny.
== Fiparitahana ara-toerana ==
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/966085"